Mursal oo dab kusii shiday is-mari-waaga doorashooyinka Soomaaliya
Afhayeenka Aqalka Hoose ayaa ku aragti ah Villa Soomaaliya oo dooneysa qof iyo cod lagu sameeyay habka 4.5.
MUQDISHO, Soomaaliya – Afhayeenka Golaha Shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya, Maxamed Mursal Cabdiraxmaan, ayaa Arbacada maanta ah xusay in aysan aqbaleyn in doorashada soo aadan ay noqoto mid dadban.
Mursal oo ka hadlay furitaanka fadhigii ay maanta yeesheen mudaneyaasha Aqalka Hoose ayaa aaminsan in maamulada dalka aysan wax door ah ku lahayn jiheynta nooca doorasho ee ka qabsoomi karta wadanka 2020-21.
"Ma aqbaleyno in doorasho dadban ay waddanka dhacdo iyaddoo la ansixiyey xeerka doorashooyinka," ayuu u sheegay Xildhibaanada golaha.
Dhanka kale, Mursal oo weerar afka ah ku qaadey ku xigeenkiisa labaad Mahad Cabdalla Cawad ayaa sheegay in socdaalkiisa Dhuusamareeb uusan ku metelin golaha. "Guddoon daba socda xukuumad waa ceeb" ayuu yiri.
Xeerka doorashooyinka oo dhigaya in doorashada soo aadan ay noqoto qof iyo cod qabiil lagu saleeyay waxaa kasoo horjeestay maamulada iyo xisbiyadda mucaaradka, oo sheegay in baalmarsan yahay dastuurka.
Hadalka Mursal ayaa imaanaya xili madaxweyneyaasha dowlad goboleedyadda ay isku raaceen in doorashada loo qorsheeyay dhamaadka sanadkan aysan noqon karin qof iyo cod, lagana heshiiyo habka lagu maareynayo.
Maamuladda ayaa shir wadatashi ah ku casuumay madaxda dowladda federaalka ah oo ka dhici doono magaala madaxda Galmudug ee Dhuusamareeb, kaasoo qaban-qaabadiisa ay socoto, wallow aanan lasoo bandhigin xiliga.
Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa iska sii xaadiriyey Dhuusamareeb, iyaddoo wararku tibaaxayaan in madaxweyne Farmaajo uu maalinta berri ah isla markaana ah Khamiis taariikhduna tahay 15-ka July uu tagayo.
Gudoomiye Mursal ayaa ku aragti ah Villa Soomaaliya oo ku adkeysaneysa in doorashadda soo aadan ay noqoto qof iyo cod, talaabadaas oo siyaasiyiinta ku sifeeyeen baadigoobka muddo kororsi maadaama waqtiga idlaanayo.
Baarlamaanka haatan shaqeynaya ayaa waqtigiisa uu dhacayaa bisha November ee sanadkan 2020-ka, halka xukuumadda ka dhamaanayo Febraayo, sanadka dambe ee 2021.
Soomaalida iyo caalamka ayaa isha ku haya natiijada uu dhalo shirka wadatashiga Dhuusamareeb kaas oo guul iyo guuldaraba wuxuu kusoo dhamaado qeexaya qaabka dalka uga gudbayo mar-xalada kala guurka ee uu wajahayo.
Golaha Shacabka oo cod u qaadey Xisaab Xirka Miisaaniyada 2017
Soomaliya 02.11.2019. 13:11
Xildhibaanadda ayaa dood badan ka yeeshay Miisaaniyadda kahor inta aysan cod gelin.
Wasiirka Difaaca iyo taliye Odowaa oo hortagey Golaha Shacabka
Soomaliya 16.12.2019. 11:13
Soomaaliya oo lugaha la gashay qalalaase la xiriira doorashooyinka
Soomaliya 25.07.2020. 12:55
Furitaanka fadhiga BF oo la muddeeyay xili la abaabulayo Mooshin
Soomaliya 05.10.2019. 11:47
Aqalka Sare oo xeer ansixiyey xili fadhigii Golaha Shacabka uu baaqdey
Soomaliya 22.06.2019. 19:41
Golaha Shacabka BF Soomaaliya oo cod u qaadey sharciyo muhiim ah
Soomaliya 25.12.2019. 14:13